Iibso Gacan-siinta Cadaadiska Rheumatoid Cadaadiska Gacanta ee Cudurka Osteoarthritis - Rar bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Cadaadiska jirka ee Dadka Waaweyn ee Cadaadiska Dhiibashada
Cadaadiska Rheumatoid Cadaadiska Gacanta ee Gacan-siinta Cudurka Osteoarthritis - M gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Faraha la'aan, naqshadeynta miisaanka fudud kuma hor istaagi doono howlaha maalinlaha ah.
Waxay ka caawineysaa lugahaaga, muruqyadaada, iyo kala-goysyada xanuunka arthritis-ka iyadoo yareyneysa walwalka meelaha cadaadiska.
Waxay kaa caawineysaa yareynta arthritis, xanuunka gacanta iyo bararka, iyo gacmaha qabow. Waxay bixisaa cadaadis fudud si kor loogu qaado wareegga dhiigga.
Faraha gacmeedku waxay u oggolaanayaan xorriyadda inay taabtaan, dareemaan, iyo xajin karaan. Suufka wuxuu u oggolaanayaa maqaarku inuu neefsado. Raaxo leh in la isticmaalo maalintii oo dhan iyo habeenkii. Samee hawlaha maalinlaha ah sida isticmaalka taleefanka, qorista, qorista karinta, tolidda iyo inbadan.
Nooca: Gacmo gashiga
Maaddooyinka: Cudurka + Canshuur
Cabbirka: S: 7.5cm, M: 8cm, L: 8.5cm
si dhakhso leh loo diro, wax waliba way ku habboon yihiin oo cabirkiisu waa is le'eg yahay. gaarsiinta in ka badan hal bil yekaterinburg
Ень удобные и эластичные, соответствует описанию, рекомендую
se siente buena compresion. cualquier cosa waxay buuxisaa qoraalo
Waxaan amar ku helay in ka badan laba bilood sanduuqa boostada. Waan kabin doonaa dib u eegista kadib adeegsiga.
raaxo badan oo fudud-xirashada iyo caafimaad!